Ingilazi Yensimbi Enamathele Ingilazi Ingabe Ingilazi Enentambo Yezokuphepha?
Metal anezikhala ingilazi laminated uhlobo ingilazi laminated esesikhundleni igridi noma ngokunemba emihle wire anezikhala ingilazi. Ngokuya ngomthamo wayo omuhle wokumelana nomlilo, ingilazi enezintambo yaqalwa yasetshenziswa e-US, futhi yakhelwe ukumelana nokushisa nemifudlana yamapayipi. Lokhu kwenza ingilazi enezintambo okokuqala ...
Umehluko Phakathi Kwezimo ze-Flexible Metal Mesh facade & Crimped Woven Wire Mesh Facades
Amakhasimende amaningi abuza ngomehluko phakathi kokumboza okuguqukayo kwe-Metal Mesh & Crimped Woven Wire Mesh facade cladding. Eqinisweni, lezi zinhlobo ezimbili zensimbi yocingo lwensimbi ziyefana ngokuya ngomsebenzi. Zivame ukusetshenziselwa ukufakwa kodonga lwangaphandle noma ukuhlobisa kwangaphakathi ...
Izinzuzo Zokufakwa Kwensimbi Yensimbi
Kumisiwe ophahleni lwensimbi anezikhala, obizwa nangokuthi ukuhlobisa insimbi yensimbi anezikhala (nokwelukiweyo wire anezikhala) wenziwe ngentambo yensimbi noma ikhebula lensimbi, enendwangu ehlukile yephethini ebusweni, uphahla lwensimbi lwensimbi luthola umphumela wokusebenza nowokuhlobisa. Ngokususelwa kuzindlela ezahlukahlukene zokwaluka, isitayela sensimbi yensimbi ...